Mampiasà pidgin - Karajia Resaka Mivantana
You are here: home> Ireo fitaovana azo a...> Mampiasà pidgin
Ny Pidgin dia fitaovana iray izay azonao ampiasaina hiresahana mivantana ao amin'ny karajia.org. Tsy voatery mandalo ao amin'ny takelaka intsony izany ianao fa mampiasa avy hatrany ny fitaovana Pidgin dia afaka miresaka.
Indro ary atolotra anareo ny fomba fakàna sy fampiasana ny Pidgin. Mizara telo izy ity, ny tapany voalohany dia ny fakàna azy, ny faharoa dia ny fampidirana azy ao amin'ny ordinatera, ary ny fahatelo dia ny fampiasana azy.
Fakàna ny Pidgin
Ny Pidgin dia fitaovana maimaim-poana ary misokatra (open source). Ny toerana hakàna azy dia ao amin'nyhttp://pidgin.im. Rehefa mandeha ao amin'ny http://pidgin.im ianao dia mahita toa izao:
Tsindrio avy hatrany ilay hoe Download Pidgin dia tehirizo ao amin'ny ordinatera-nao na tonga dia sokafy.
Fampidirana azy ao amin'ny Ordinatera
Rehefa voarainao ilay fichier na nosokafanao dia toa izao no mitranga
Fidio aloha ny teny ampiasainao dia tsindrio ny OK. Marihina fa azo ampiasaina amin'ny teny maro ny Pidgin. Ohatra hoe Frantsay.
Mitranga ny sary toa ity ambany ity, dia tsindrio ny Suivant
Mitranga ny boaty toa ity ambany ity izay mampiseho ny fifanarahana rehefa mampiasa fitaovana toa itony. Dia tsindrio ny Suivant
Rehefa avy eo dia teneniny anao hoe aiza no hametrahana ny Pidgin. Azonao ovaina raha tianao. Dia tsindrio amin'izay ny Installer
Miandry fotoana kely arakaraka ny tanjaky ny ordinateranao.
Asehony anao avokoa ny zavatra ampidiriny ao amin'ny ordinateranao.
Rehefa vita dia miseho indray ity boaty iray ity.
Tafiditra tsara ao amin'ny ordinatera ny Pidgin ka azonao tsindrina ny bokotra Fermer.
Indray mandeha ihany ianao no mampiditra ny Pidgin ao amin'ny ordinateranao, izany hoe ny zavatra rehetra nataonao hatreto dia amin'ny voalohany ihany no atao.
Ndao ary hosokafana amin'izay ny Pidgin.
Fanokafana sy fampiasana ny Pidgin
Ny Pidgin dia azonao jerena ao amin'ny lisitry ny Programa ao amin'ny ordinateranao. Ho an'izay mampiasa XP tahaka ity amin'ny sary ity dia ao amin'ny Programmes no ahitana azy, ny sary famantarana dia sarina vorona kely volomparasy. Tsindrio ilay sarikely dia hisokatra ny Pidgin. Toa izany foana no ataonao isaky ny hanokatra ny Pidgin amin'ny manaraka.
Amin'ny voalohany ampiasana ny Pidgin ao amin'ny ordinateranao dia mila mampiditra andinindininy vitsivitsy tahaka ireto ambany ireto ianao. Marihina fa amin'ny voalohany ihany no miseho ireto toerana fampidirana ny andinindininy ireto.
Rehefa sokafana voalohany ny Pidgin dia miseho ito boaty ito. Tsindrio fotsiny ilay hoe "Ajouter..."
Hisokatra ny boaty iray misy hoe "Ajouter compte". Eo amin'ilay hoe Protocole dia fidio ilay hoe IRC, eo ambanimbany eo.
Eo ihany, eo amin'ilay hoe "Utilisateur" dia ampidiro ny solonanarana tianao hampiasaina, tsara kokoa raha ny solonanarana ampiasainao ao amin'ny serasera no atao. Ampidiro eo amin'ilay hoe serveur ny irc.serasera.org(tandremo diso). Dia mampidira tenimiafina izay tianao eo amin'ilay hoe "Mot de passe". Ilaina io tenimiafina io ao aoriana ao raha tianao hotehirizina ny solonanarana. Dia avy eo tsindrio ny bokotra "Ajouter"
Raha vao manindry ny bokotra Ajouter teo ambony ianao dia tafiditra avy hatrany ao amin'ny efitra #serasera ary hahita ny namana sy ho afaka hiresaka avy hatrany.
Tsindrio ilay bokotra hoe Fermer amin'ilay boaty misy ny compte-nao dia alehibiazo ilay boaty fanoratana.
Toa ity ambany ity ny zavatra hitanao rehefa nohalehibiazina ny fenetre. Eto dia ao anatin'ny efitra iray antsoina hoe #serasera ianao. Etsy ankavanana ny lisitry ny namana ao anatin'ny efitra misy anao. Raha te hiresaka ao anaty efitra ianao dia manoratra ery ambany fotsiny dia tsindrio ny touche ENTREE. Raha toa moa ka hiresaka manokana amin'ny namana iray ianao dia tsindrio indroa amin'ny souris ny anarany.
Etsy ambony dia misy "onglets" maromaro misy anarana, anisan'izany ny "#serasera". Eny no hahitanao sy isafidiananao ny efitra azonao idirana (ohatra hoe #serasera) na ny namana tianao iresahana manokana (ohatra hoe BotLives01 sns). Ny anaran'ny efitra dia misy # hatrany eo alohany (Ohatra hoe #serasera).
Azonao atao izany ny manindry ny anaran'ireny "Onglets" ireny rehefa te hahita ny zavatra soratana ao anatiny. Matetika rehefa misy zavatra vaovao ao anatiny dia lasa menamena ny anaran'ny Onglets. Eto ambany ohatra dia niditra ao amin'ny Onglet "Global" aho, izay misy ny vaovao ankapobeny. (Tsindrio ny sary raha te hijery azy lehibe)
Ilay toerana malalaka eo ambany no hanoratana. Afaka manoratra ianao, ka rehefa vita ny soratra dia tsindrina fotsiny ny touche ENTREE eo amin'ny clavier-nao (Tsindrio ny sary raha hijery azy lehibe)
Toa izao ny zava-mitranga rehefa avy nanoratra :-) aho ka nanindry ny touche ENTREE
dia toa izany hatrany. Afaka mandeha amin'izay ny fifanakalozana.
Rehefa vita ny resaka dia azoko atao ny manidy ny fenetre toa ny manidy programa rehetra. Fa azo atao koa ny manindry amin'ny bokotra havanana (boutton droit amin'ny souris) ilay sarikely famantarana ery ambany ery. Jereo amin'ny sary eto ambany. Dia hisokatra ny boatikely misy safidy hoe "Quitter" (tsindrio ny sary raha hijery azy lehibe)
Dia mihidy tanteraka ny resaka mivantana amin'izay. Amin'ny manaraka, tonga dia manokatra ny Pidgin fotsiny ianao dia tafiditra fa tsy mila mampiditra zavatra maro intsony.
- Efa nolazaina tetsy ambony ihany hoe raha te hiresaka manokana amin'ny namana iray ianao dia tsindrio indroa amin'ny souris ny anarany. Azonao atao koa nefa ny manoratra hoe /query solonanarana (ka ny solonanarana dia ny anaran'ilay namana tianao hiresahana) eo amin'ny fanoratana eo ambany, na aiza io na aiza, dia tsindrio ny touche ENTREE. dia misokatra ihany koa ny onglet hiresahana manokana aminy.
- Raha te hanokatra na hiditra amin'ny hevitra hafa ianao dia soraty fotsiny hoe /join #efitra (ka ny efitra dia ny anaran'ny efitra tianao hidirana). Ohatra raha te hilalao motus ianao dia soraty hoe /join #motus na raha te hilalao scrabble dia hoe /join #scrabble
- Raha tianao ho hita ny lisitry ny efitra rehetra dia soraty hoe /list
Ny baiko hafa dia ho hainao tsikelikely ihany rehefa tena mampiasa ny karajia ianao.